fanontaniana FS2004 Help
2 taona 1 volana lasa izay #18 by Dariussssss
Raha hiaina olana, fahadisoana na raha misy fanontaniana momba ny FS2004 simulator, mametraka izany eto. Koa hilaza aminay mikasika ny fanamboarana sy ny vahaolana ho an'ny olana isan-karazany sy ny fahadisoana in FS2004.
1 taona 11 volana lasa izay #213 by mmickey
Miarahaba Nividy fonosana ho an'ny B777 noho ny FSX avy any Rikooo ary izaho tsy afaka ny hikasika \_ fampiasana FMS na tontonana ny fanamboarana. Mba ampio.
Tena vaovao aho ny FSX. Misaotra.
1 taona 11 volana lasa izay #214 by Dariussssss
Nanontany tena aho tokony hiezaka mihitsy aza aho mba hanampy anao. ...
Voalohany indrindra, diso toerana mba hangataka, dia izao no mba hanampy tamin'ny FS2004, fa tsy FSX.
Faharoa, ny fomba nanoratra ity iray ity, dia zara raha afaka mahatakatra izany.
Fahatelo, tsipiriany bebe kokoa, izay fiaramanidina mihitsy no misintona.
Faha-efatra, dia tena tsy mihevitra fa ianao nividy izany fiaramanidina eto. Noho ny tena fantatro, ny zava-drehetra eto ny freeware.
Fotoana mamorona pejy: 0.248 segondra